आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर हर्षबढाइ गरिरहेका माधव नेपालमाथि प्रदीप नेपालले लगाए यस्तो गम्भीर आरोप ! - SidhaSamachar
आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर हर्षबढाइ गरिरहेका माधव नेपालमाथि प्रदीप नेपालले लगाए यस्तो गम्भीर आरोप !
आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षी गठबन्धनसँग हर्षबढाइ गरिरहेका नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमाथि उनी निकट नै मानिने नेता प्रदीप नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई देखाइ दिने नाममा बरिष्ठ नेता नेपालले गम्भीर अपराध गरेका ठोकुवा गरेका छन् ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल निकट नेता प्रदिपले माधवले गर्नुभएको यो नराम्रो कामलाई इतिहासले कठोर मुल्यांकण गर्ने आफ्नो निश्कर्ष पनि राखेका छन् ।
You May Like: How to use Nepal Telecom VoLTE service on iPhone?
माधव नेपालले आफ्नो इगोको लागि गर्नै नहुने काम गरेको प्रदीपको भनाई छ । ‘जहाँसम्म माधव नेपालको कुरो छ, मैले यहाँ केही लेखिरहनु नपर्ला । संविधान बचाएँ भनेर उहाँले जति भने पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा भनिने शक्ति पृथकीको प्रणालीलाई नै विस्थापित गरिदिनु भयो, ‘माधव नेपालकै कारण सर्वोच्चले संबिधानमाथि आक्रमण गरेको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा नेपालले लेखेका छन् ।
यस्तो छ प्रदीपको निचोडः
यसपालि पनि न्यायलयको ओभरल्यापले अप्ठ्यारो निम्त्याउने खतरा छ । अदालतले केपी ओलीलाई ठेगानमा ल्याएर बाँकी काम संसद्को जिम्मा दिनुपथ्र्यो । सांसदले आफ्नो अधिकार खोसिएको टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने १ त्योभन्दा सजिलो त सधैँभरिका लागि अदालतले नै संसद्को व्यवस्थापन गर्ने साहसिक निर्णय गरे भइहाल्थ्यो !
फैसलापछि मैले तीन जनाको प्रतिक्रिया सुनेँ । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता । उहाँले फैसलाको प्रशंसामा गीत गाउनु स्वाभाविकै थियो । तर उहाँले जब प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपर्र्छ भन्नुभयो – म छक्क परें । वरिष्ठ अधिवक्ताको ज्ञान यस्तै हुन्छ ? मुद्दा व्यवस्थापिकाको हो । राष्ट्रपति कसरी जोडिन आउनुभयो त्यहाँ ? १ महिलालाई पहिलो पद दिनु हुँदैन भन्ने पुरुष मानसिकता मात्र हो यो । काँग्रेसका मान्छेहरू किन महिलालाई पहिलो पदमा आउन हुन्न भन्छन् ? पहिले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि उहाँहरू महाअभियोग लगाउने चेतनामा पुग्नु भएको थियो, अब अहिले विद्या भण्डारीतिर आँखा गाडिएको छ उहाँहरूको । केपी ओलीको ‘मनपरी’ लाई रोक्नेसम्मको फैसलासम्म ठीक छ अदालतको । तर संसद्को अधिकारमाथि आफ्नो अधिकार थोपर्ने काम चाहिँ बेठीकै हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल–केपीलाई ठेगानमा ल्याइयो भन्ने निष्कर्ष उहाँको थियो । तर उहाँले कुन कुरा बिर्सनु भयो भने यो फैसलाले कुनै दिन उहाँलाई पनि यसरी नै दपेट्नेछ । जहाँसम्म माधव नेपालको कुरो छ, मैले यहाँ केही लेखिरहनु नपर्ला । संविधान बचाएँ भनेर उहाँले जति भने पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा भनिने शक्ति पृथकीको प्रणालीलाई नै विस्थापित गरिदिनु भयो ।
[ तपाईसंग वा तपाईको वरिपरी पनि कुनै प्रतिभा, रचना र विकृति विसंगतीका घटना छन् भने हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्नुहोस हामी तपाईलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौं । धन्यबाद ।। ]
‘पार्टी फोडुवालाई पार्टीभित्र राख्दैनौ, उपेन्द्र यादवलाई कारवाही हुन्छ’: नेता महतो
May 11, 2021 sidasamachar
Feb 27, 2021 sidasamachar